ရောမအတိတ်မှခရီးသွား present ည့်သည်သို့ Badalona | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 04/04/2021 15:30 | အဆင့်မြှင့်တင် 06/04/2021 17:04 | စပိန်မြို့ကြီးများ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Badalona သည်မြို့ကြီးပြကြီးတစ်ခုတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်စုပ်ယူသောထိုဒေသများအနက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်း၏ထူးခြားချက်ရှိသည် ဘာစီလိုနာ။ သို့သော်၎င်းသည်လွတ်လပ်သောမြူနီစီပယ်နှင့်ဆက်လက်လူ ဦး ရေတွင်စတုတ္ထမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည် Catalonia.
ထို့အပြင်၎င်း၏ဇစ်မြစ်သည်ပြသထားသည့်အတိုင်းရှေးအစဉ်အဆက်အကြွင်းမဲ့တည်ရှိမှုကိုပြန်သွားသည် ရီးယဲလ်နှင့်ရီးယန်းတို့ကျန်ရှိနေသေးသည် သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမြို့တော်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ကြသည် ရောမ ဘီစီ ၁၀၀ ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သည် တောင်ကြီးမြို့။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လက်တင်အမေရိက၏အရေးပါဆုံးအမွေအနှစ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ သင် Badalona အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်.
1 Badalona မှာဘာကြည့်ရမလည်း
1.1 Pont del Petroli, မြို့ရဲ့သင်္ကေတ
1.2 Sant Jeroni de la Murtra ဘုန်းကြီးကျောင်း
1.3 la Badalona စက်မှုလုပ်ငန်း
1.4 ပန်းခြံများ, Badalona ၏စစ်မှန်အစိမ်းရောင်အဆုတ်
1.6 Dalt de la Vila ၏ရပ်ကွက်အတွင်း
1.7 Badalona ၏ပြတိုက်
1.8 လင်းပိုင်တို့၏အိမ်နှင့် Quinto Licinius ၏ဥယျာဉ်
တိကျစွာရောမအကြွင်းအကျန်ကက်သလစ်မြို့၏အကြီးအဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ဘေးမှာခမ်းနားတဲ့ကမ်းခြေတွေ၊ လှပတဲ့ပန်းခြံတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တွေပါရှိပါတယ်။ ငါတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာအားလုံးကိုသွားမယ်။
Pont del Petroli, မြို့ရဲ့သင်္ကေတ
Pont del Petroli နှင့်Anís del Mono စက်ရုံ
ပင်လယ်ထဲသို့မီတာ ၂၅၀ ဝင်သောဤခြေလျင်တံတားသည်လက်ရှိတွင်တစ်ခုဖြစ်သည် အထိမ်းအမှတ်များ ကာတာလန်မြို့ကနေ။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်ကြီးမားသောရေနံတင်သင်္ဘောများတည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တံတားကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဖြိုဖျက်တော့မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်။ သို့သော်၎င်းကို pastry စားဖိုမှူး ဦး ဆောင်သော Badalona မှလူများစုကဖြိုဖျက်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့သည်။ Josep Valls။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်လေ့ကျင့်ရန်သင့်တော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရေအောက်ငုပ်ခြင်း ထို့အပြင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည် အံ့သြဖွယ်နေဝင်ချိန်.
Sant Jeroni de la Murtra ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒါတစ်ခုပါ gothic လက်ဝတ်ရတနာ ဘာစီလိုနာ၏ပြည်နယ်၏။ ၎င်း၏ပထမဆုံးဆောက်လုပ်ရေးသည် ၁၂ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့်မြေအောက်ခန်းထည့်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစမီးမောင်းထိုးပြ ခံတပ်မျှော်စင် အရာကမ်းခြေကနေပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
la Badalona စက်မှုလုပ်ငန်း
Anís del Mono စက်ရုံအတွင်း
၁၉ ရာစုအတွင်းမှာဒီသဘောအတိုင်းတီထွင်ခဲ့တုန်းကကက်တလန်မြို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအမွေအနှစ်များစွာကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ ဤအအဆောက်အ ဦး များထဲတွင်ထွက်ရပ် အန်နစ်ဒယ်မိုနိုစက်ရုံဟောင်း, ဒီယနေ့ဒီသောက်၏ရိုးရာပီပီအကြောင်းကိုပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအစသွားရောက်ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်သည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အရန်ကုမ္ပဏီ၏စက်ရုံ၁၈၉၉ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောမော်ဒန်အဆောက်အ ဦး Jaime Botey i Garrigaသူလည်းမြို့၏မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆောက်အ ဦး ဖို့လတ်ခံရဖို့ဖြစ်တယ် ရုပ်ပြပြတိုက်။ သို့သော်စီမံကိန်းကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ပန်းခြံများ, Badalona ၏စစ်မှန်အစိမ်းရောင်အဆုတ်
Can Solei i Ca l'Arnúsပန်းခြံ
Catalan နိုင်ငံ၏ဆွဲဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာဥယျာဉ်များစွာရှိသည်။ စုစုပေါင်း 96 ဟက်တာ မြို့၏အစိမ်းရောင်ဒေသများနှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများအဘို့အစစ်မှန်အဆုတ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တွင် Can Solei နှင့် Ca l'Arnúsပန်းခြံ။ ဤစစ်မှန်သောရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွင်ရေကန်နှင့်ရဲတိုက်ငယ်လေးများကဲ့သို့သောမျှော်စင်များရှိသည် စောင့်ကြည့် နှင့် ဂီ နှင့်ပင်တစ် ဦး Грott့။
ဒီနှင့်အတူ, မြို့ရှိအခြားပန်းခြံများဖြစ်ကြသည် Turó d'en Caritg ၏, တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး; Montigaláကနေတ, လမ်းလျှောက်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, Gran Sol ၏အာရှမျိုးစိတ်အချို့နှင့်လည်းကောင်း၊ Nueva Lloreda မှတအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ Casa Barriga ကနေတ ဦး တည်း.
မြို့မှာရှိတယ် ကမ်းခြေငါးကီလိုမီတာ သင့်ကိုရေချိုးရန်နှင့်အပြည့်အဝအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်ပျော်ရွှင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေများသည်သင့်ထံလည်ပတ်ရန်အဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသူတို့တွင်ကျနော်တို့ကမ်းခြေဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ် Barca María၏, del Cristall, တံငါသည်များ၏, ဘူတာရုံ၏ y de la Mora.
Dalt de la Vila ၏ရပ်ကွက်အတွင်း
၎င်းသည်ရာစုနှစ်များစွာအတွင်းရှိမြို့၏အာရုံကြောဗဟိုချက်ဖြစ်သော Badalona မြို့ဟောင်းအားပေးခဲ့သောအမည်ဖြစ်သည်။ သင်ထင်သည်အတိုင်း၊ မင်း၌အလှတရားများစွာ၏အထိမ်းအမှတ်များစွာရှိသည်။ သူတို့တွင် ရောမပွဲကြည့်စင်၏အကြွင်းအကျန် en Carrer က de Les Eres.
သို့သော်အားလုံးအထက်, အဖိုးတန် Santa Maria ၏ဘုရားကျောင်း, အထင်ကြီး Renaissance မျက်နှာစာနှင့်တစ် ဦး imposing ခေါင်းလောင်းနှင့်အတူ။ နှင့်အညီ, အလွန်နီးကပ်သည် Torre Vella၁၃ ရာစုမှထူးခြားသည့်အိမ်ကြီးအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Plresque မျက်နှာစာနှင့် Gothic မြေအောက်ခန်းဒီထဲမှာထင်ရှား။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြို့၏ဟောင်းနွမ်းသောအပိုင်းကို Noucentista နှင့် Modernista စတိုင်ရှိ၎င်း၏မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အိမ်များကိုမမြင်ဘဲမထားခဲ့ပါနှင့်။ ဥပမာ, Ca l'Amigó, Can Clapés နှင့် House Planas.
ကာတာတလန်မြို့ရဲ့မြေအောက်မှာတွေ့ရတဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနအမွေအနှစ်တွေအကြောင်းမင်းတို့ပြောပြပြီးပြီ။ ဤအကြွင်းအကျန်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသင့်အားလမ်းမများပေါ်သို့ပို့ဆောင်သည့်အထင်ကြီးလောက်သောပြတိုက်တစ်ခုတွင်ပြသထားသည် တောင်ကြီးမြို့ XNUMX ရာစုဘီစီ၌တည်၏။
၎င်း၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3400 စတုရန်းမီတာမှာပြသရတနာအချို့ကိုဖြစ်ကြသည် ရေပူစမ်းအဆိုပါ decumanus သို့မဟုတ်အဓိကလမ်းနှင့်အပေါင်းတို့ထက်, the Badalona ၏ဗီးနပ်စ်၂၈ စင်တီမီတာရှိသည့်ရုပ်ထုသည်မြို့စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစတင်ခဲ့သည်။
လင်းပိုင်တို့၏အိမ်နှင့် Quinto Licinius ၏ဥယျာဉ်
ပြတိုက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ဤအဆောက်အ ဦး နှစ်ခုသို့သွားရန်အခွင့်အရေးကိုလည်းရရှိသည်။ The လင်းပိုင်အိမ် ၎င်းသည်မြေအောက်မြေအောက်ဖြစ်ပြီးအဖိုးတန်သောနေရာတွင်နာမည်ပေးထားသည် လင်းပိုင် mosaic သူတို့ကမိုးရွာဖို့ရေကန်ကိုအလှဆင်ကြတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် အိမ် ရောမမျှော်စင်သည်မီတာရှစ်ရာနီးပါးရှိပြီးယနေ့တွင်သုံးရာခန့်သာမြင်နိုင်သည်။
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, Quinto Licinius ၏ဥယျာဉ်တော် သင့်ကိုနည်းနည်းစိတ်ပျက်စေနိုင်တယ်။ ယနေ့သင်မြင်နေရသည့်အရာမှာထိုအချိန်ကအပင်များနှင့်ပန်းများပြည့်နှက်နေသည့်ရေကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မည်သို့သဘောတူသည်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည် ကို virtual အပန်းဖြေ စက်ရုံကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤအရပ်ဌာန၌, Tabula Hospitalisအတည်ပြုခဲ့သည်သောစာချုပ်တစ်မျိုး ပဉ္စမလိုင်နီယပ်စ် Baetulo ကိုကာကွယ်သူအဖြစ်ပြတိုက်မှာသင်တွေ့နိုင်တယ်။
နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာဒါလонаရဲ့ရောမအတိတ်ဟာသိပ်အရေးကြီးတယ် မဂ္ဂနာ Celebratioလက်တင်စစ်တပ်များသည်၎င်း၏လမ်းများနှင့်အချိန်ကာလ၏လက်မှုပညာနေရာများသို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်း၎င်း၏ထောင့်များတွင်နေရာချကြသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Badalona။ ၄ င်း၏အရေးပါသောရောမအမွေအနှစ်တွင်အဖိုးတန်သောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ သင်ဤမြို့ကိုသွားလျှင်သင်နောင်တမရပါ။ အခြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်သင်၏ခရီးကိုအခွင့်ကောင်းယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ပါ Catalonia ရှိအကောင်းဆုံးရေပန်းခြံများစာရင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Badalona